Ulahlekelwe isisindo lapho abantu abadumile (yaseshashalazini kanye cinema abalingisi, abaculi kanye nabanye abasebenzi kwamasiko), njalo ayimkhangi. Kubonakala sengathi inqubo kokuhlukana isisindo okweqile zidlulile ngokushesha futhi kalula futhi ukuthi indlela yabo emangalisayo ukusisiza, futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole ngokuvumelana oyifunayo ezinjalo.
Enye yalezi abesifazane waziwa iguqula Svetlana Permyakova. Ukudla izinkanyezi lokugcina KVN, futhi manje actress ethandwa lutho kodwa ukudla ukudla okunomsoco.
Lo mlingisi wavuma ukuthi siqedwa ngokuphelele ekudleni isinkwa sakho, ukudla okunoshukela futhi ukubhucungwa njalo ukwelashwa.
Svetlana Permyakova Ukudla kuhilela ezilula ezinempilo ngaphambi emini kanye umkhawulo zamakha ashisayo kanye nosawoti. Kuyaziwa ukuthi ngokweqile wale mithandazo kuphakamisa egcina amanzi emzimbeni, okuholela ukuvuvukala.
Futhi, actress uye ayifakiwe ukhukhamba ahlukahlukene, ngibhema futhi ethosiwe ukudla, ukudla steamed kuphela.
Indima ebalulekile ekuguquleni izinkanyezi kudlalwa nokudla lesifanele. Svetlana ngokuphelele idina ngasekupheleni kanye ukudla main at it ekuseni. Ukuze actress akuyona inkinga enkulu, ngoba ngokwemvelo "Lark".
Ukudla Svetlana Permyakova ngaphumelela futhi sibonga okulinganiselwe ukudla washisa. imiphumela ingabonakali kungabonwa ngokumane ukunciphisa ingxenye evamile ukudla.
Isimo kubalulekile ngempumelelo kwesisindo kulesetayelekile ukuphuza umbuso - okungenani 1.5 amalitha ngosuku. Kungaba fresh izithelo ayo, lamanzi esiphethu, kodwa esitolo kusuka iziphuzo ezinoshukela kufanele kugwenywe. baphuza uketshezi eliningi eyanele kusiza ahlanze umzimba kusuka izinto eziyingozi nokusaphaza.
ibhulakufesi Olinganiselayo - enye imfuneko, lapho Svetlana Permyakova Ukudla iphumelela kakhulu. Ngenxa kwakuphakathi ukudla ekuseni emzimbeni has ukuze uthole amandla esiphezulu ipilo ehle futhi ajabule. Libuye libe ibhulakufesi okunomsoco uzokusindisa kusukela nokuguqulwa Ungadla "okubi".
Ingxenye ebalulekile lokuphumula okuphelele, ngawo kushintshwe ukusebenza efanele zonke izinhlelo zangaphakathi, ezihlanganisa uhlelo wokugaya ukudla, ukulala kahle ebusuku.
Kuyosisiza kakhulu ekunciphiseni umzimba nokugcina isikhumba kuyaqina baba intandokazi actress ukubhucungwa. Isikhungo samanzi massage and isandla massage wasiza Svetlana hhayi kuphela ukuthola ukuvumelana oyifunayo, kodwa futhi ukuze sigweme izinkinga kungenzeka ngesikhumba (flaccidity, elula emamaki), okuyinto ngokuvamile avele okusheshayo kwesisindo.
Futhi, ngiyaqiniseka actress, enempilo kwesisindo akunakwenzeka ngaphandle umsebenzi eziyisisekelo. Kufanele ukhethe iqoqo umzimba for wonke amaqembu kwemisipha beye bahileleka ezinhlekeleleni inqubo ukuqeqeshwa, kanye izifundo babengabahwebi ukhululekile kusuka iphuzu ngokwengqondo umbono. Akuwona wonke umuntu uyafisa, isikhathi kanye ithuba njalo ukuya ejimini, kodwa umzimba ezilula ekhaya ungenza ngamunye. Ngisho nezinto ezibonakala ezivamile like ukugibela izitebhisi, ukuhlanza indlu bese uya ngoba ukudla ungagcina imisipha toned.
Njengoba ubona, Ukudla Svetlana Permyakova okusekelwe ezimisweni eziyisisekelo yokudla ukudla okunempilo. Ngokwe-actress, ingafinyelela enhle yabo salowo nalowo muntu wesifazane. Ukuze wenze lokhu, ulungise indlela yokudla kanye nokuzivivinya ithathe isikhathi esithile ukuba imisebenzi ngokomzimba futhi Ukuzinakekela. Izithombe esekhulile mncane Svetlana Permyakova kuyasiqinisekisa of ngokunemba endleleni yayo abakhethiwe.
Izidakamizwa "Kogitum" izilinganiso "ngoba" futhi "ngokumelene"